Tsy ampy taona ny iray tamin’izy ireo. Naiditra am-ponja vonjimaika ny dimy lahy ary nalefa eny amin’ny Toby fitaizana zaza maditra kosa ilay tsy ampy taona. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena, noho ny hamaroan’ny fitarainana voarain’ny mpitandro filaminana mahakasika ny fisiana andian-jiolahy mpanao sinto-mahery sy fandrahonana amin’ny basy ireo mponina amin’ireo faritra ireo dia nanao ny fanadihadiana izy ireo. Loharanom-baovao avy amina tsara sitrapo no nahafantarana fa mihaodihaody eny ireo andian-jiolahy. Ny alakamisy 13 jona tokony ho tamin’ny 7 ora hariva, nidina ifotony ny polisy ka nisy ny fifanenjehana. Nandritra ny fanadihadiana azy ireo teo anivon’ny sampandraharahan’ny polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika faha-4 dia niaiky ny helony izy ireo. Milamindamin-dratsy eny an-toerana amin’izao fa mbola tanarahan’ny mpitandro filaminana ireo namany tavela.